शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २२ कात्तिक
ठगीको अभियोगमा उद्योगी डा. रुप ज्योति यतिबेला दरबारमार्ग प्रहरीको हिरासतमा छन् । काठमाडौंका बृजेन्द्रकृष्ण मल्लले प्रहरीमा दिएको ठगी अभियोगको जाहेरीका आधारमा उनी पक्राउ परे ।
मल्ल र ज्योतिबीचको लेनदेन विवाद लामो समय चल्यो । यो विवाद काठमाडौं जिल्ला अदालत हुदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेपछि अन्ततः डा. ज्योति पक्राउ परे । प्रहरीले ५ दिन हिरासतमै राखेर ज्योतिमाथि अनुसन्धान गर्न अनुमति माग्दै आज जिल्ला अदालतमा पेश गर्यो । अदालते ३ दिनको अनुमति दिएपछि ज्योतिलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकु हुदै अन्ततः दरबारमार्गको प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । जहाँ उनी यतिबेला ध्यान गरेर बसिरहेका छन् ।
यस्तो छ घटना सृंखला
काठमाडौंका बृजेन्द्रकृष्ण मल्ल र डा. रुप ज्योतिको कम्पनीबीचको विवाद २०७१ सालदेखि सुरु भएको हो । मल्लले डा. ज्योतिको परिवार संलग्न रहेको भनिएको ल्याण्डमार्क कम्पनीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा बनाउन लागेको घर खरिद गर्न २ जेठ २०७१ मा १० लाख रुपैयाँ दिए ।
सोही वर्षको १७ भदौमा आफूले कम्पनीलाई थप १ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिएको मल्ल बताउँछन् । आफूले घर किन्न रकम बुझाए पनि तोकिएको समयमा घर नपाएको, आफूलाई विक्री गरेको भनिएको जग्गा अर्कै कम्पनी खडा गरी विक्री गरेर डा. ज्योतिले आफूलाई ठगेको उनको आरोप छ ।
आफूलाई घर बनाएर दिन्छु भनेर पैसा लिएको तर घर पनि नदिएको र पैसा फिर्ता पनि नपाएको भन्दै मल्लले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । सो मुद्दा दर्ता भएपछि ज्योतिले फिराद पत्र (जवाफ) सँगै मल्लबाट आफूले लिएको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अदालतमा जम्मा गरे । तर, त्यसअघि नै मल्लले १० लाख रुपैयाँ भने फिर्ता लिइसकेका थिए ।
डा. ज्योतिले १३ मंसिर २०७५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई १ लाख २६ हजार रुपैयाँ कोर्ट फि तिरेर मल्ललाई दिनुपर्ने १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अदालतमा बुझाए । कसैलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझेमा अदालतलाई कूल रकमको १ प्रतिशतका दरले कोर्ट फि बुझाएर जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
फेरि पर्यो प्रहरीमा जाहेरी
डा. ज्योतिले आफू विरुद्धको ठगी मुद्दामा मल्ललाई तिर्नुपर्ने भनिएको रकम बुझाइ पाउँ भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फिरादपत्र दर्ता गराए । अदालतले सो फिरादपत्रको आधारमा कोर्ट फि लिएर ज्योतिले तिर्न खोजेको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा गर्ने अनुमति दियो ।
अदालतले अनुमति दिएको ३ दिनपछि अर्थात १६ मंसिर २०७५ मा डा. ज्योति विरुद्ध प्रहरीमा फेरि ठगी अभियोगमै किटानी जाहेरी दिए । अघिल्लो मुद्दामा ज्योतिले अदालत मार्फत बुझाएको रकम नबुझी मल्ल प्रहरीकोमा पुगेका थिए ।
ज्योतिले अदालत मार्फत बुझाएको रकम आफूलाई चित्त नबुझेपछि आफू पुनः प्रहरीकोमा गएको उनको भनाइ छ ।
ज्योति विरुद्ध अर्काे उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी माग गर्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० मंसिर २०७५ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेश विरुद्ध डा. ज्योतिले सर्वाेच्च अदालतमा निषेधाज्ञा (जिल्ला अदालतको पक्राउ आदेश खारेज गर्न माग गरिएको) को निवेदन दर्ता गरे ।
डा. ज्योतिको सो निवेदन सर्वाेच्चले गत १८ कात्तिकमा खारेज गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको इजलासले जिल्ला अदालतको पक्राउ गरी ज्योतिमाथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश खारेज गरेन । सो आदेशको पूर्णपाठ भने सर्वाेच्चले उपलब्ध गराएको छैन ।
यसरी सर्वाेच्च अदालतले जिल्लाको आदेश सदर हुने आदेश गरेपछि सोही आदेशलाई टेकेर प्रहरीले डा. ज्योतिलाई २१ कात्तिकमा पक्राउ गरेको हो । डा. ज्योति सो दिन साझ सिंगापूरबाट नेपाल फर्कदै थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६, ०८:५१:००